March | 2016 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
အမေရိကန်မှာက သူတို့ပြည်သူတွေဟာ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေးမလုပ်ကြောင်း ဖယ်မထားကြောင်း ပြဖို့ အမျိုးမျိုးကြိုးစားကြတယ်။ မြန်မာမှာတော့ မွတ်စလင်ကို ဘယ်သူပိုမုန်းကြောင်းပြိုင်ကြတယ်
March 31, 2016 drkokogyi
Than Zaw Oo shared Steven’s post
အမေရိကန်မှာ သမ္မတဝင်ပြိုင်မယ့် ဒေါ်နယ်ထရန့်က သူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးကို မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်မုန်းတီးရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုက မီဒီယာတွေတင်မက ပြည်သူတွေကပါလက်ရှိပြည်တွင်းမှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေကို ရယ်ဒီကယ်ဖြစ်အောင် တွန်းမပို့ဖို့အတွက် တိုက်တွန်းခဲ့သလို အမေရိကားသမိုင်းတစ်လျှောက် နဲ့ လက်ရှိအချိန်ထိအောင် contribute လုပ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် လူဖြူ/လူမည်း မွတ်စလင်တွေရဲ့သမိုင်းကို ပြန်ဖော်ပေးတယ်။
ဒါတင်မကသေးဘူး မျက်နှာဖုံးသတင်းတွေမှာ ထရန့်ကို အချိန်မလွန်ခင်တားဆီးကြစို့ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမျိုးတွေ တင်ဆက်တယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက အာရပ်သူဌေးတွေနဲ့ ထရန့်နဲ့ ပလဲနံပသင့်နေပြီး အမေရိကန်မှာတော့ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေးလုပ်နေတဲ့ အကြောင်း ဖော်ထုတ်လိုက်တယ်။ ထရန့်လည်း ကွဲတာပေါ့။ အမေရိကန်ရဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ တခြားနိုင်ငံခြားရေး မဟာဗျူဟာတွေ ဘယ်လိုပင်ရှိနေပါစေ၊ သူတို့ပြည်တွင်းထဲမှာတော့ မွတ်စလင်တွေကို ဖိနှိပ်တယ်၊ ချောင်ထိုးတယ် ဆိုတာမျိုး အပြောမခံရအောင် အမျိုးမျိုးကြိုးစားနေတာတွေ့ရတယ်။
We hereby demand the Myanmar Government to arrest this criminal Myine Gyi Ngu @ U Thuzana, an MI implant and his cohorts like Nay Myo Wai
March 30, 2016 March 31, 2016 drkokogyi
Later he will BLUFF as USUAL that he hada“dream” that the Masjid was built on the Buddhist Pagoda land and incite the people and the stupid DKBA Buddhist Karen Rebels to destroy the Masjid and buildapagoda on that place.
He had done few times and destroyed few Masjids before and done that trick onaChurch.
This CRIMINAL Myine Gyi Ngu MI Implant fake monk should be arrested for these crimes, for association with rebels, holding AK 47 and pistols and for ILLEGALLY went into Thailand frequently and once admitted intoaBangkok hospital.
My friend wrote>K N U လို လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတရပ်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း
လျော့မတွက်နဲ့ = The power of the person (Military Intelligence Agent Implant) who could divide the powerful KNU (into Buddhist DKBA and Christian faction) should not be insignificant.
Mgsaw Kayin added9new photos.
၂၉.၃.၂၁၆ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် ရွှေဂွန်းကျေးရွာတွင် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်ရှိအောက်ပိုင်းဗလီကြီးဘေးကပ်လျှက်၁၅ပေအကြယ်လမ်းသွယ်လမ်းတွင်မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်မှ၂၆.၃.၂၀၁၆ရက်နေ့ ကားတစ်စီးဖြစ်လာရောက်၍၎င်းလမ်းသွယ်တွင်သွားကာ ဆရာတော်တစ်ပည့်တစ်ဦးပေါက်တူးကိုင်ပြီး ကားပေါ်ဆင်းလာ၍လမ်းအလည်ဘဟို တည့်တည့်တွင်ဘုရားရုပ်တုတော်တစ်ဆူကိုမြုပ်နန်ပြီးပြန်သွားခဲ့ပါသည် ရွာသားများရဲကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည် ရဲလာကြည့်သွား၍ ရုပ်တုကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပြန်မြုပ်နန်ခဲ့ပါသည်
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို နစ်နေတဲ့သင်္ဘောကြီးလို့ သမ္မတလူယုံ ဦးဇော်ဌေးက ဖွင့်ချလိုက်ပြီ
March 28, 2016 March 28, 2016 drkokogyi
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း –
စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သော နိုင်ငံအဖြစ်မှ ဒီမိုကရေစီဖြေလျှော့ရေး စတင်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား အဖြစ် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ကနဦးတွင် ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ရခိုင်အရေး၊ မိတ္ထီလာအရေး၊ လက်ပံတောင်းအရေး၊ ကျောင်းသားအရေး စသည်တို့ကို ကောင်းမွန်ပါးနပ်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းချက်အပေါ်လည်း ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွှတ်ပေးပြီး လပိုင်းအကြာ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အတိုက်အခံတို့ကို ပင်မနိုင်ငံရေး ရေစီးကြောင်းအတွင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာသည် နှင့်အမျှ ပုံရိပ် ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် အပြတ်အသတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ သမ္မတသက်တမ်း သည်လည်း မတ်လကုန်တွင် ကုန်ဆုံးတော့မည် ဖြစ်သည်။ ငါးနှစ်တာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ သင်ခန်းစာများနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အနီးကပ်အရာရှိ တစ်ဦးအဖြစ် ညွှန်းဆိုနိုင်သည့် သမ္မတရုံး ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါသည်။
Bama Buddhist Military Regime’s Soldiers will die and Are going to Hell!
March 28, 2016 drkokogyi
One of my best article in Burma Digest…
In commemoration to 27th March
Tatmadaw (Myanmar Military) Revolution Day ..i.e People’s revolution of the Tatmadaw ….
Read my article in Burma Digest
ဘာသာရေးကို၊ လူမျိုးရေးကို အခြေခံပြီး ခွဲခြားတဲ့လူတွေဟာ တကယ်တော့ နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံတော် ရဲ့ ရန်သူတွေဖြစ်ပါတယ်
မွန်းတည့်နေ – Weekly News Journal
March 26 at 2:02pm ·
”ဘာသာရေးကို၊ လူမျိုးရေးကို အခြေခံပြီး ခွဲခြားတဲ့လူတွေဟာ တကယ်တော့ နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံတော် ရဲ့ ရန်သူတွေဖြစ်ပါတယ်”
မွန်းတည့်နေ။ အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၅၀) – မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု များ ကင်းစင်ရေးနေ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ Inya Lake ဟိုတယ်မှာ မတ်လ (၂၁) ရက်က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ တိုင်းရင်း သားလူနည်းစုတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှား သူတွေနဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံက စိတ်ပါဝင်စား သူတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ပပျောက်ရေးအတွက် အကြံပြုချက်တွေကို ဆွေး နွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကာဒီနယ် ချားလ် (စ)ဘိုရဲ့ မိန့်ခွန်းကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Genocide in Myanmar မြန်မာပြည်တွင်း မျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီး United Nation က ထောက်ပြတဲ့ အချက်ရှစ်ချက်ပါ။
Nyi Nyi with Ko Ko Gyi
မြန်မာပြည်တွင်း မျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီး
United Nation က ထောက်ပြတဲ့ အချက်ရှစ်ချက်ပါ။
၂ ( ထိုသူတို့ကို) အသိအမှတ်ပြုရန်ငြင်းဆန်ခြင်း
မြန်မာပြည်သူတစ်ဦး၏ ခံစားချက် (၇)
“အဘရေပြေးပြေးလို. အိမ်နီးချင်းကုလားတွေက ကျနော်.ကိုပြောလို. သူတို.ဆွဲထုတ်လို. နို.မို.ဆိုကျနော်သေပြီ” လို. အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ်အငြိမ်းစားရဲဝန်ထမ်းကြီး ဦးကျော်အုန်းက ကျနော.ကိုပြောပါတယ်။ သူကမွတ်စလင်တွေအများစုနေထိုင်တဲ. မီတ္ထီလာရပ်ကွက်တစ်ခုမှာနေတာပါ။